Global Voices teny Malagasy » Etazonia – Rosia : “Peregrouzka” sa “perezagrouzka” ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Mey 2018 7:19 GMT 1	 · Mpanoratra Suzanne Lehn Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Rosia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fiteny, Mediam-bahoaka, Politika
Ny 6 Martsa, tao Zeneva, natolotry ny Sekreteram-panjakàna, Hillary Clinton, ho an'i Sergueï Lavrov, minisitry ny raharaha ivelany rosiana ny boaty kely iray miaty bokotra iray «averina velomina» miaraka amin'ny teny rosiana peregrouzka misoratra eo amboniny, ho entina hanamarihana ny fahatsaràn'ny fifandraisana eo amin'i Etazonia sy Rosia. Saingy ny teny rosiana ho an'ny «averina velomina» dia perezagrouzka, fa ny dikan'ny hoe peregrouzka dia «tototra tafahoatra», ary tsy tara tamin'ny fanipihana ilay hadisoana i M. Lavrov.
Ito ny fantina iray tamin'ireo fisaintsainan'ny bilaogera (mpiteny anglisy) momba ilay teny sy ny politika.
Sean Guillory avy amin'ny Sean's Russia Blog dia nanoratra toy izao  tao anatin'ny lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe «Bokotra tototra tafahoatra» [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra ato anaty lahatsoratra] :
[…] Fantatsika rehetra fa ny fitantanan'i Obama dia manao ezaka mba hamerenana ny fifandraisana miaraka amin'i Rosia. Tao anatin'ny tenin'i Joe Biden tamin'ny Febroary no hita ny marika voalohany, «manindry ny bokotra ‘averina velomina’ ». […]
Dia izay, toy ny mandeha no fahitàna ilay bokotra ‘averina velomina’, na dia hita aza fa tsy ny famerenana mamelona ny fifandraisana no olana voalohany, fa ny hahitàna izay teny rosiana marina hilazàna ny «averina velomina». […]
[…] Hiteny amiko ianareo hoe tsy maintsy «niasa mafy» ny tarik'i Clinton mba hahitàna ny teny tena mifanaraka amin'ny «averina velomina», dia mbola votsotra tsy hitan-dry zareo ihany ve ? Ho an'ireo mpiaramiasa aminy, angamba Rtoa Clinton tokony hanindry ilay bokotra «averina velomina». […]
Ireto misy fanehoankevitra roa tamin'ireo 50 vitsivitsy voatanisa amin'io lahatsoratra io.
Lyndon avy amin'ny Scraps of Moscow  :
Ny zavamisy hoe ny teny perezagrouzka na perezagrouzit‘ dia nampiasaina tany anaty gazety rosiana (tany anatin'ireo lahatsoratra «fototra») efa nandritry ny taona maro mba hilazàna ny hoe «mamelombelona indray» ny fifandraisana iray na hamadihana pejy (mba hampiasàna sarinteny fampiasan'ireo media). Tsy mbola nahita velively aho «sbros» na teny hafa nampiasaina ho amin'io toejavatra io. Araka izany, teny iray ihany no marina – perezagrouzka – nefa nosimbàn-dry zareo. Tena mahaketraka, ary tsy misy fialantsiny na fanazavana atao amin'izany na iray aza, afa-tsy ny tsy fahaizana mibaribary. Betsaka ny olona erantany, izay (tsy mbola nifanerasera velively tamin'ireo tena Amerikàna) no mino ny fitsaratsaram-poana ataon'ireo «tupye amerikantsy» kanefa tsy manome bala fanampiny amin'io fomba io.
Buster, avy amin'ny Moscow Through Brown Eyes 
Lyndon, nozaraiko aloha ilay fanehoankevitrao momba ilay hadisoana tamin'ny teny. Saingy misy, raha ny hevitro, olana iray lalina kokoa.
Ahoana no hisehoana ho diplaomaty hentitra miezaka ny hiditra anaty fifampiraharahàna iray manandanja hamerenana ny fifandraisan'ny tany roa tonta, amin'ny alàlan'ny fitondràna KILALAO iray mba hanombohana ny fifampiraharahàna ?
Tsy misy azoko atao afa-tsy ny maka sary ao an-tsaina ny mety ho nosainin'ireo Rosiana momba io kilalao io. Tsy manao afa-tsy ny manafina ny maha-kidaladala sy maha-vendrana an'iny fotoana iny ilay resaka dikanteny. Ianao miteny fitsaratsarampoana, ry zareo miteny fanaovana safobemantsina.
Tao anaty lahatsoratra iray teo aloha , nanoratra i Sean, ankoatra ny hafa :
[…] Farafaharatsiny, afaka ataon-dry zareo Amerikana ny manohy ny peregrouzka sy perezagrouzka amin'ny tovarich, bosch, vodka, glasnost, perestroïka, da sy niet ao anatin'ny voambolana rosiana any aminy. […]
Leopolis nanoratra an'ity , momba ilay «diplaomasian'ny fanomezana-hanihany» nataon'i Etazonia :
Ny niafaràny, androany ny Washington Times  dia manontany : «Tamin'ny fandikàna tsara ny «averina velomina» teo amin'ilay bokotra mananihany natolotr'i Rtoa Clinton an'Ing. Lavrov tao Zeneva tamin'ny Zoma, inona no tao an-tsain'ny [Departemantam] Panjakana !» momba ilay tsy fitandremana vitany, tsy hoe ratsy fotsiny fa tena manahirana, manembana. Ny navoitran'ilay lahatsoratra dia resaka manandanja kokoa hahafantarana raha toa i Etazonia ka hiditra amin'ny fampiasàna ilay hanihany sy fandrika ao anatin'ny fifandraisana diplaomatikantsika miaraka amin'ireo goavan'ny hery nokleary eto ambonin'ny tany (an'iza ny manaraka : vorontsiloza (fanamarihan'ny mpandika : «turkeys» amin'ny teny anglisy) vita tamin'ny fingotra ho an'i Erdoğan ve ?. Ilay «bokotra averina velomina» resahana eto tsy mba hoe bokotra fibaikoana akory, fa bokotra vita tamin'ny fingotra fanao amin'ny varavarana – fa dia very aho. Amin'izao fotoana izao, ho an'ny Rosiana, rehefa voaporofon'ity tranga ity hoe mila mamerina kely ny fahaizany teny rosiana ny ekipan'i Clinton, dia mihetsiketsika ao Maosko Ing. Lavrov maminavina raha toa ka olona tsy alehany daholo no mameno ny [Departemantam-] Panjakana (tsy misy ve na iray aza olona miteny ny rosiana ho tenindreniny ka azo nanontaniana?) […]
Transatlantic Politics nanoratra hoe  :
[…] Kely fotsiny dia mety hisintona ny lakolosin'ny fiafaràn'ity diplaomasian'ny fanomezana ity io hadalàna io. Inona marina no tena dikan'ilay bokotra io ? Fiaingàna vaovao miaraka amin'i Rosia ve, mifototra amin'ny inona ? Tao amin'ny foiben-toeran'ny OTAN ao Bruxelles, tsy dia samihafa tamin'izay nambaran'i Condy ny an'i Hillary. Andriamanitra o, nolazainy mihitsy aza i Polonina sy ny Repoblika Tseky fa hoe «mpanonofy antoandro» noho ny nidiran'izy ireo tamin'ny resaka fiarovana amin'ny bala afomanga , tetikasa iray manahirana mafy an'i Rosia.
Izany eo ihany, fa ny kabariny mampandry adrisa dia tsy nampitony velively ny ahiahy ao Eoropa taorian'ny taratasy nalefan'ny filoha Obama nanolotra hevitra hampirina ireo fitaova-piarovana amin'ny bala afomanga ho takalon'ny tena fanampian'ny rosiana hiatrehana an'i Iràna. Fa mampanontany tena ny hoe iza no tena vendrana kokoa : ny mino fa hoe io adivarotra io dia mety handaitra tokoa sa mino fa i Kremlin dia hiesona ao anatin'io tetika «fiaingàna vaovao» mifototra aminà kilalao iray izay tsy novolavolaina tsara akory io.
Saingy tsy ilay bokotra ‘averina velomina’ ihany no hadalàna nisy. Tao Bruxelles, vitan'i Hillary koa ny nanova ny anaran'ny roa tamin'ireo nifampiresaka taminy nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety : lasa anaranà vatomamy iray (Solano) no nomeny ho an'ny lehiben'ny diplaomasia Eoropeàna, Javier Solana, ary ‘Benina’ ny an'i Benita, iilay kaomisera eoropeàna misahana ny fifandraisana ivelany. Samy nijoro teo anilany daholo izy roa ireo ary nampiakatra ny masony hijery ny lantra no sady nieritreritra ny hoe «ah zut, fa maninona ary ny Amerikàna no tsy mahavita mitadidy ny anaran'ireo olona miresaka aminy ee ?» […]
Eternal Remont nanoratra ity , tao anaty lahatsoratra iray nitondra lohateny hoe «Ny diplaomasian'ireo tsikitsiky goavana» :
[…] Raha ny fijery azy, toy izao no azontsika andrasana amin'ilay sekreteram-panjakana vaovaontsika, izay amin'izao fotoana izao tsy maintsy miverina mifampiraharaha indray momba ny fifanarahana iray manandanja ho fampihenana ny fitaovampiadiana ifanaovana amian'Ing. Lavrov, hitondra azy ho amin'ny fanafoanana ny fandaharanasa famokarana fitaovampiadiana nokleary iraniàna ikasàna hamongorana an'i Israely, no sady koa hametrahana indray ny fifampitokisana eo amin'ireo mpiaradia izay manontany tena hoe rahoviana i Washington no hamadika azy ireo.
Ahoana no hahatongavana amin'izany ? Miaraka aminà sarin'akohokely vita tamin'ny fingotra sy bokotra maneno, angamba. Maninona moa raha atao ondantseza mangetotra mihitsy? Tena mety hitondra fanajàna anao eo ambony latabatry ny fifampiresahana izany. […]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/12/119360/
 nanoratra toy izao: http://seansrussiablog.org/2009/03/07/overcharged-buttons/
 manindry ny bokotra ‘averina velomina’: http://www.ft.com/cms/s/0/21cb9768-f525-11dd-9e2e-0000779fd2ac.html?nclick_check=1
 lahatsoratra iray teo aloha: http://seansrussiablog.org/2009/03/10/whos-to-blame-for-peregruzka/
 nanoratra an'ity: http://leopolis.blogspot.com/2009/03/gag-gift-diplomacy-pop-music-flops-and.html
 nanoratra hoe: http://www.transatlanticpolitics.com/2009/03/08/hillarys-gaffes-in-europe-a-preview-for-biden/
 nanoratra ity: http://eternalremont.blogspot.com/2009/03/diplomacy-of-cheese.html